आलिया भट्टले 'कास्टिङ काउच' बारे पहिलोपटक खोलिन् मुख!
एजेन्सी, हालै रिलिज भएको बलिउड चलचित्र ‘राजी’ लाई प्राप्त भएको प्रतिक्रियाबाट अभिनेत्री आलिया भट्ट निकै खुशी भएकी छिन् । चलचित्रमा आलियाको अभिनयलाई सबैले प्रसंसा गरेका छन् । यी दिनहरुमा उनी ‘राजी’ को प्रमोशनमा व्यस्त रहेकी छिन् । एक अन्तर्वार्तामा आलियाले कास्टिङ काउचको मुद्दामा खुलेर कुराकानी गरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय कोरियोग्राफर सरोज खानले कास्टिङ काउचलाई लिएर बयान दिएपछि बहस शुरु भएको छ । यस बिषयलाई लिएर आलियाले पनि आफ्नो मौनतालाई तोड्दै एक अन्तर्वातामा यस्तो भनिन्, “बहस गरेर कास्टिङ काउचको अन्त्य हुदैन । जो महिलाहरु कुनैपनि तरिकाको शोषणको शिकार भईरहेका छन्, उनीहरुले तुरुन्तै एक्शन लिनु पर्दछ । बहस गरेर फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक नकरात्मक माहोल बन्ने गर्दछ । मानिसहरुले यस इन्डस्ट्रीलाई नकारात्मक रुपले हेर्नेछन् । यो सत्य हो कि इन्डस्ट्रीमा काम पाउन निकै मेहनत गर्नु पर्छ र यस मेहनतमा केही व्यक्तिहरुले तपाइको फाईदा उठाउने गर्दछन् । यो बलिउडमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा हुने गरेको छ । यदि कोही यसको शिकार हुन्छन् भने उनीहरुले पुलिसको मद्दत लिनु पर्दछ । “
साथै ‘राजी’ को कलेक्शनको कुरा गर्ने हो भने चलचित्रले बजेटको पैसा उठाएर कमाई शुरू गरिसकेको छ । चलचित्रले ४ दिनमा नै ३९ करोड़को कमाई गरेको छ । रिलीजको साथै आलिया भट्टको यो चलचित्रले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाई रहेको छ । आलिया भट्टको चलचित्र ‘राजी’ २०१८ सालको पाचौँ सबैभन्दा धेरै कलेक्शन गर्ने चलचित्र बनेको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०२, २०७५१८:५१
सलमान र डैनीको ‘निजि भाग’ हरेक युवतीलाई मनपर्छ भन्दै यस्तो सम्म भनिन् यी अभिनेत्रीले!
सुटिङमा रम्दै रणवीर र आलिया ! दुई बीच प्रेमको फूल झाँगिन थाल्यो !
क्रिशल र सेड्रिना अभिनित म्युजिक भिडियोको टिजर सार्वजनिक [भिडियो]
यसकारण १ हप्तासम्म सुतेनन वरुण धवन
यी अरबपति स्टारले दान गरे आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ ! अब जिउनेछन् साधारण जीवन !
विवाह भएको ९ महिना नपुग्दै सोनम कपूरले पतिको थर हटाएर एकाएक नाम परिवर्तन गरेपछि…